UDube useyiKhosi, obemqeqesha kwiRichards Bay uthi uzoba uphumelela
July 20, 2021 Impempe.com
IKaizer Chiefs seyikuqinisekisile okuke kwabikwa yiMpempe emasontweni ambalwa edlule ukuthi uThabani Dube uzogijima kuleli qembu laseNaturena ngesizini ezayo.
Sabika ngalokhu ukuthi iChiefs yayibeka eceleni kudala imali yokuthenga uDube. Cofa lapha ukufunda lolu daba: IChiefs isisibeke eceleni isamba sokuthenga oweRochards Bay.
IChiefs iqinisekise ukuthi uDube usengowayo ngoLwesibili ntambama, yathi usayine iminyaka emithathu kwafakwa nombandela wokwelula ngonyaka uma iphela. UDube, oneminyaka engu-28, ubegijima kwiRichards Bay ngesizini edlule.
Kodwa Impempe ithole ukuthi iChiefs yamlandela esadlala kwiTS Galaxy ngaphambi kokuthathwa yileli qembu laseMhlathuze. UDube wayeseqenjini leTS Galaxy elaphoxa iChiefs phambi kwezwe iyishaya emdlalweni wamanqamu kwiNedbank Cup ngo-2019.
Usegcine esayinile kwiChiefs kanti ize yamethula njengomdlali wayo ngoLwesibili ngemuva kokuthi ebuyile eqenjini lesizwe eliwine iCosafa Cup eGqeberha ngempelasonto. Ngokuqondana kwezinto, uDube ubedlala noNjabulo Ngconbo emuva maphakathi nenkundla kwiBafana.
UNgcobo bazophinde badlale naye kwiChiefs njengoba naye ethulwe ngesonto elidlule kuleli qembu laseNaturena. Obemqeqesha kwiNatal Rich Boyz ngesizini edlule, uSimo Dladla, uthe akangabazi ukuthi iqembu elizomthola lizobe lihlabene. UDladla ukhulume nempempe ngaphambi kokuthi iChiefs imethule lo mdlali.
“Ngesikhathi efika eqenjini kwakufana nokuthi ngimlethelwe nguMdali ngoba vele ngangimdinga umdlali wasemuva maphakathi nenkunxa oyinxele. Ngingumqeqeshi othanda othanda ukuthi iqembu lakhe liyiqale emuva iminyakazo,” kusho uDladla oseyiphini lomqeqeshi kwiSwallows FC.
“Lokho kudinga ube nomdlali oyinxele nodlala ngesokudla ukuze kwenze kahle. Ukufika kwakhe kwawenza waba lula umsebenzi wami. Uwenza kahle umsebenzi wakhe wokuvala emuva kanti uyakwazi nokufunda umdlalo. Indlela akhululeka ngayo yenza nozakwabo banyukelwe wukuzethemba.
“Angingabazi ukuthi iqembu elizomsayina lizobe lihlabene. Enye into enhle ngaye wukuthi uyasiza noma kuhlaselwa futhi muhle ngekhanda. Uyakwazi ke nokushaya ama-free kick ukuthi nje ngoba ngesizini edlule besinoKhanyisa Mayo obenza lowo msebenzi,” kuchaza uDladla.
FUNDA NALA: UFrosler noNgcobo sebefuna ukukhohlwa wusizini lweChiefs, sebebheke ama-Olympics
Ekhuluma nabeDiski Times ngsonto elidlule, uDube ubonge lo mqeqeshi ngokumsiza ekutheni abe yisitonbha esiphelele. Wathi kunezinto uDladla amsize kuzo.
Ebuzwa ngalokhu, uDladla uvele wancibilika. “Bengingazange ngizwe ngalokho. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho. Impela ngamsiza kulokho engangibona eshoda kukho ukuze afike ezingeni elifanele. Ngikholwa wukuthi ithalente lakhe lisazomusa kude.
“Inkinga wukuthi angiyena umuntu olandelana nabadlali uma sesiqedile enkundleni. Iningi labo anginazo ngisho izinombolo zabo zocingo. Kodwa ngiyabonga ukuzwa ukuthi kanti wawubona umehluko engawenza kuye.”
Previous Previous post: UFrosler noNgcobo sebebeke eceleni iChiefs, babheke injabulo kuma-Olympics
Next Next post: ICeltic inqwaha noLuthuli obefunwa uthuli yiChiefs neSundowns